မိန်းမက ယောကျာ်းဖြစ်သူ ကိုသတ်တဲ့ မှုခင်းသတင်းတွေဖတ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် နဲ့ ဘက်ထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့အခွီ ဗီဒီယိုလေး – Shwewiki.com
မိန်းမက ယောကျာ်းဖြစ်သူ ကိုသတ်တဲ့ မှုခင်းသတင်းတွေဖတ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် နဲ့ ဘက်ထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့အခွီ ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ…. ကိုပေါက်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းလာခဲ့ပြီး ကြိုးစားအားထုတ် မှုတွေကြောင့်လည်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက် ဟာဆိုရင် အမြဲလိုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်သလို စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝပြီး သူတစ်ပါးပေါ်မှာလည်း အမြဲကူညီတတ်တဲ့ သူဖြစ်တာကြောင့် ချစ်ခင်သူတွေ ပေါများနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ကိုပေါက် က သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနှစ်ယောက် ကိုလည်း မွေးဖွားထားပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာခဏဆိုသလို ကိုပေါက်က ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေကို ဖော်ပြပေးပလေ့ရှိပါတယ်နော်။ ယခုမှာလည်း ကိုပေါက်က ပရိသတ်တွေ ရယ်မော်ေ ပျာ်ရွှင်စေဖို့အတွက် အပျင်းအပြေဆော့ကစားထားတဲ့ ဟာသ tik tok ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ ကိုပေါက် မိန်းမတွေက ယောကျာ်းဖြစ်သူတွေကို သက်တဲ့ မှုခင်းသတင်းတွေကို ဖတ်ပြီး ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဘက်ထားတဲ့ ငွေတွေကိုတောင် ပြန်ပေးခဲ့တာကို ကြည့်မိသူတိုင်း ရယ်မောသွားအောင် ဟာသရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့လည်း ကိုပေါက်က ” စိုက်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး အလိုက်သိပါတယ်လို့” ” ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ ရေးသားဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ ကဲ…ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ရယ်မော ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် ကိုပေါက် ရဲ့ ဟာသ tik tok ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နေယ်……။
ပရိသတျကွီးရေ…. ကိုပေါကျကတော့ အနုပညာလောကမှာ အကောငျးဆုံးလြှောကျလှမျးလာခဲ့ပွီး ကွိုးစားအားထုတျ မှုတှကွေောငျ့လညျး အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိနတောဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ ရုပျရှငျဒါရိုကျတာအနနေဲ့ အနုပညာနယျပယျမှာ ရပျတညျခဲ့ပွီလညျးဖွဈပါတယျ။ ကိုပေါကျ ဟာဆိုရငျ အမွဲလိုလို ပြျောပြျောရှငျရှငျ နတေတျသလို စိတျသဘောထား ပွညျ့ဝပွီး သူတဈပါးပျေါမှာလညျး အမွဲကူညီတတျတဲ့ သူဖွဈတာကွောငျ့ ခဈြခငျသူတှေ ပေါမြားနတောပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
ကိုပေါကျ က သာယာပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုလေးဘဝကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားလေးနှဈယောကျ ကိုလညျး မှေးဖှားထားပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ မကွာခဏဆိုသလို ကိုပေါကျက ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတှကေို ရိုကျကူးပွီး ပရိသတျတှကေို ဖျောပွပေးပလရှေိ့ပါတယျနျော။ ယခုမှာလညျး ကိုပေါကျက ပရိသတျတှေ ရယျမျောေ ပျြာရှငျစဖေို့အတှကျ အပငျြးအပွဆေော့ကစားထားတဲ့ ဟာသ tik tok ဗီဒီယိုလေးကို တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ ကိုပေါကျ မိနျးမတှကေ ယောကျြားဖွဈသူတှကေို သကျတဲ့ မှုခငျးသတငျးတှကေို ဖတျပွီး ကွောကျကွောကျနဲ့ ဘကျထားတဲ့ ငှတှေကေိုတောငျ ပွနျပေးခဲ့တာကို ကွညျ့မိသူတိုငျး ရယျမောသှားအောငျ ဟာသရိုကျကူးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့လညျး ကိုပေါကျက ” စိုကျကွညျ့စရာမလိုပါဘူး အလိုကျသိပါတယျလို့” ” ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ ရေးသားဖျောပွထားပါသေးတယျ။ ကဲ…ခဈြပရိသတျကွီးရေ ရယျမော ပြျောရှငျစဖေို့အတှကျ ကိုပေါကျ ရဲ့ ဟာသ tik tok ဗီဒီယိုလေးကို ပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျပါတယျ။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနယျေ……။
“ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ ဘုဏ်းသိုက်နဲ့သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေခဲ့မှုတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြ လိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း “